Ebufe Mbupu na Ego | Martech Zone
Amachaghị m na ị nwere ike ịkọwa atụmatụ abụọ a nke ụrà ndị ahịa. Ọ dị m ka na iwelata ego bụ ụzọ dị ukwuu iji mee ka mmadụ gaa na saịtị ecommerce gị, mana ịbupu n'efu nwere ike ịbụ ụzọ iji bulie ọnụego mgbanwe. Achọrọ m ịmata otú ndị ahịa na-azụ ahịa na-esi eguzosi ike n’ihe nọ. Ọ bụrụ n ’ị na-ebelata ego, ndị be gị ụfọdụ ga-alọta ma zụrụ n’enweghị ego ego. Ọ bụrụ na ị na-enye mbupu n'efu, nke ahụ abụghị akụkụ nke saịtị gị nke onye ọ bụla ga-atụ anya ma jiri ya mee ihe ugboro ugboro?
Otu n'ime nsogbu kachasị ndị na-ere ahịa Internetntanetị chere ihu kemgbe ụbọchị otu na-eguzogide ụgwọ ụgwọ. Iji mee ka ịzụ ahịa na weebụ dị ka ịzụ ahịa n'onwe gị, ụfọdụ ndị ahịa malitere inyefe mbupu n'efu na iwu ịntanetị. Mbupu n'efu na-akpali ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ ịzụrụ karịa? Site na Monetate Infographic.
Tags: na-agbadambupu n'efuịzụ ahịa n'ịntanetịmbupu